Hada waad gali kartaa tafatirkaaga si aad ula wadaagto kuwa kale Lightroom | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Sawir
Adobe Lightroom sidoo kale waxay qaadatay casriyeyn xiiso leh in aynaan rabin in aan ka marno qaybahaas. Nooc cusub oo keenaya awood u leh inuu la wadaago daabacadaha isticmaaleyaasha kale sidaasna ku qaato isla xaqiiqda wadaagga barnaamijkan weyn ee Adobe illaa heer kale.
Laakiin maahan oo keliya in waxku halkan joogaan, laakiin isla daabacaadda ay leeyihiin dhex galay hagaajinta kontaroolada, qulqulatooyinka shaqada ee jilicsan, iyo waxqabadka guud ee la hagaajiyay.
Maalmahan waxay ka waxtar badnaayeen cusboonaysiintaan labada barnaamij ee Adobe, sida waa Sawire, Photoshop iyo xitaa waxyaabo cusub: Adobe PSCAmera. Hadda waan awoodnaa ku dar cusbooneysiinta Lightroom cusub ee Casharrada la Hagayo taasina waxay barbar socotaa awoodda wax wadaagga.
Casharradan Waxay ku kala qoran yihiin 'Hanuunsan' iyo 'Isdhexgal'. Daabacadaha isdhexgalka ah ayaa noo ogolaanaya inaan u aragno talaabo talaabo sida habka loo saxo sawir. Laga bilaabo halkan waxaan aadeynaa Nuqulada Wadaagga ah taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad cidna la wadaagto daabacadahaas aad ka dhigtay kuwa gaarka ah. Markii aad 'geliso' iyaga, Lightroom wuxuu daryeelaa sameynta taxane 'kahor iyo kadib' si ay ugu fududaato qof walba inuu ku dhex daro shaqadooda farshaxanka.
Riwaayadaha kale waa kantaroolka cusub ee midab daabacan ayaa loo heli karaa mid maxalli ah, "Noocyada" taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan ku abuurno "daaweyn" kala duwan sawirada, awoodda aan u dejineyno dejinta sawirrada RAW, tusaalooyinka ISO Adaptive, rukhsadda si loogu wareejiyo sawir Lightroom ah ipadka illaa Photoshop isla aaladda Apple, xarunta dalagyo dulsaaran, iyo awood u lahaanshaha astaan-biyood; taasina waxay ka timaadaa sheeko xariirta aaladaha mobilada.
Kaliya joogi maayo halkan waa warka Lightroom, sidaa darteed waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad cusbooneysiiso barnaamijka si aad ugu raaxeysato nooca cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Adobe's Lightroom waxaa lagu cusbooneysiiyaa wadaagista waxka beddelka, xakameynta weyn ee wax ka beddelka, iyo waxyaabo kaloo badan
Pop-art iyo Andy Warhol: waxyaabo aadan ka ogeyn dhaqdhaqaaqan faneed ee asalka ah